एक महिनासम्म ब्राभित्र राखेर महिलाले कोरलिन् हाँसको अण्डा – CityPokhara | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Pokhara एक महिनासम्म ब्राभित्र राखेर महिलाले कोरलिन् हाँसको अण्डा – CityPokhara | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Pokhara
Posted on May 4, 2020 May 4, 2020 /5महिना अगाडी / 11394 जनाले हेर्नुभएको
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा एकजना महिलाले आफ्नो ब्राभित्र हाँसको अण्डा राखेर कोरलिदिएकी छिन् ।
बेट्सी रोस नामकी ती महिलाले पार्कमा अलपत्र अवस्थामा फेला पारेको हाँसको अण्डालाई आफ्नो ब्राभित्र पैँतिस दिनसम्म राखेर कोरलिदिएकी छिन् । उक्त अण्डाबाट हाँसको बचेरो निस्किएको छ ।
बेवारिसे हाँसको अण्डालाई आफ्नो ब्रा भित्र राखेर कोरल्ने ती महिलाको धेरै प्रसंसा गरेका छन् सामाजिक सञ्जालमा ।
समाचार अनुसार क्यालिफोर्नियाको भिसालियास्थित एक सार्वजनिक पार्कमा परिवार सँग हिँडिरहेको बेला उनले क्षतविक्षत अवस्थामा रहेको हाँसको एउटा गुँड देखिन् । उक्त गुँड बाहिर हाँसको एउटा अण्डा थियो । उक्त अण्डामा सानो चिरा परेको भएपनि अरु असर परेको थिएन ।
तथापि मानिसले कोरलेको उक्त चल्लाको अवस्था निकै नाजुक थियो । केही दिनको मेहेनतपछि मात्र उक्त चल्ला राम्रोसँग हिँड्न सक्यो ।